Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai iyo Amsterdam duulimaadyada ka imanaya Prague jiilaalkan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai iyo Amsterdam duulimaadyada ka imanaya Prague jiilaalkan
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Czechia Breaking News • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai iyo Amsterdam duulimaadyada ka imanaya Prague jiilaalkan.
Jadwalka duulimaadka jiilaalka 2021: Isku xirka tooska ah ee ka imanaya Madaarka Prague ilaa ku dhawaad ​​100 goobood iyo soo noqnoqoshada korodhka wadooyinka jira.
Waxa jiri doona xidhiidho cusub oo la soo bandhigo inta lagu jiro xilliga jiilaalka. Wizz Air waa in ay bixiso duullimaadyo ka imanaya Prague ilaa Rome, Catania iyo Naples, halka Smartwings ay ku darto duulimaadyada Dubai iyo London.
Jidka Tel Aviv waxa maamuli doona Israir Airlines, Blue Bird Airways iyo Arkia Airlines xilliga jiilaalka ee 2021.
Waxaa sidoo kale jiri doona waddooyin cusub oo cusub xilli jiilaalka, kuwaas oo ah waddada Prague - Odessa, ee Bees Airline, iyo SkyUp Airlines xiriir cusub oo Kyiv ah. Jidadka cusub ee Ryanair ayaa wanaajin doona gelitaanka Warsaw iyo Naples.
Laga bilaabo Axadda, 31ka Oktoobar 2021, jadwalka duulimaadka jiilaalka ayaa dhaqan galaya, isagoo bixinaya xiriir toos ah Garoonka diyaaradaha ee Václav Havel ee Prague ilaa 92 goobood, oo ay ku jiraan wadamada qalaad sida Kenya, Mexico iyo Dominican Republic. Waxa kale oo jiri doona wadooyin cusub oo lagu shaqeeyo jadwalka duulimaadka jiilaalka, tusaale ahaan, Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai iyo Amsterdam. Bilawga hawlgallada saldhiga Eurowings waxa kale oo ay gacan ka geysan doontaa fududaynta dib u soo celinta iyo horumarinta dheeraadka ah ee socodka hawada.
Sida ku cad jadwalka duullimaadyada jiilaalka ee 2021, 47 diyaarad siday ayaa duullimaadyo toos ah ka samayn doona Prague. Shirkadda Jarmalka ee Eurowings, oo xubin ka ah Kooxda Lufthansa, ayaa ka furanaysa xarunteeda Madaarka Prague. Labadeeda Airbus A319 waxay u adeegi doontaa isku xirka 13 goobood oo Yurub ah, oo ay ku jiraan Canary Islands iyo Barcelona. Ryanair Waxay qorsheeyeen isku xirka Prague ilaa 26 magaalo, oo ay ku jiraan meelaha caanka ah sida London, Krakow iyo Dublin. Kooxda Smartwings waa inay ka shaqeeyaan isku xirka ku dhawaad ​​20 goobood oo hoos yimaada jadwalka duulimaadka jiilaalka, sida Canary Islands, Madeira, Hurghada, Paris iyo Stockholm. Xidhiidhada tooska ah ee jaartarka fog ee meelaha qalaad sida Maldives, Punta Cana, Mombasa, Cancún iyo Zanzibar ayaa sidoo kale laga heli karaa Garoonka diyaaradaha ee Václav Havel ee Prague.
Sida ku cad jadwalka duulimaadka jiilaalka ee 2021, 47 diyaarad siday ayaa duullimaadyo toos ah ka samayn doona Prague. Shirkadda Jarmalka ee Eurowings, oo xubin ka ah Kooxda Lufthansa, ayaa furaysa saldhigeeda garoonka diyaaradaha ee Prague. Labadeeda Airbus A319 waxay u adeegi doontaa isku xirka 13 goobood oo Yurub ah, oo ay ku jiraan Canary Islands iyo Barcelona. Ryanair waxa ay qorsheysay isku xidhka Prague ilaa 26 magaalo, oo ay ku jiraan meelaha caanka ah sida London, Krakow iyo Dublin. Kooxda Smartwings waa inay ka shaqeeyaan isku xirka ku dhawaad ​​20 goobood oo hoos yimaada jadwalka duulimaadka jiilaalka, sida Canary Islands, Madeira, Hurghada, Paris iyo Stockholm. Xidhiidhada tooska ah ee jaartarka fog ee meelaha qalaad sida Maldives, Punta Cana, Mombasa, Cancún iyo Zanzibar ayaa sidoo kale laga heli karaa Garoonka diyaaradaha ee Václav Havel ee Prague.
"Waan ku faraxsanahay inaan daawano dib u bilaabashada wadooyin hore loo shaqayn jiray, bilaabista isku xidhka meelo cusub, iyo soo noqnoqoshada korodhka wadooyinka jira. Waad ku mahadsan tahay isbeddelka hadda jira, waxaan qabanay in ka badan saddex milyan oo rakaab ah bartamihii Oktoobar. Waxaan sidoo kale rajaynaynaa in, iyada oo ay ugu wacan tahay xidhiidhada cusub ee lagu bixiyo jadwalka duulimaadka jiilaalka, tiradu waxay sii wadi doontaa koritaanka. Waxaan wali ka fognahay tirooyinka rakaabka ee la diiwaan geliyey 2019, laakiin marka la eego tirada meelaha la bixiyo, waanu soo dhowaanaynaa, "Jiří Pos, oo ah Guddoomiyaha Guddiga Agaasimayaasha Garoonka Diyaaradaha ee Prague, ayaa yidhi, isagoo raaciyay: "In soo socota xilliga jiilaalka, waxaan fileynaa xiisaha kordhaysa ee socotada Czech ee safarrada meelaha qalaad. Waxaan ku faraxsanahay inay awood u yeelan doonaan inay ka doortaan xulashooyin badan oo ay u safri doonaan labadaba si toos ah iyo wareejinta. "
Iyada oo si tartiib tartiib ah dib loogu bilaabo socodka hawada, isku xirka dib loo furay ayaa lagu soo celinayaa Prague. British Airways waxay mar kale isku xidhi doontaa Prague iyo Madaarka City ee badhtamaha London, Czech Airlines waxay dib u soo noolayn doontaa wadadii Copenhagen, Ryanair waxay dib u bilaabi doontaa adeegyadii tooska ahaa ee Barcelona, ​​Paris iyo Manchester, halka Jet2.com ay dib u bilaabi doonto duulimaadyadeeda Birmingham. Manchester, Leeds iyo Newcastle.